तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास - १० - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – १०
म १० कक्षामा पनि फेल भएर पछि पास भएको थिएँ र १२ कक्षामा पनि फेल भएँ । म फेल भएको थाहा पाएर आफन्त लगायत सबैले गिज्याउँछन्, जीवनमा केही गर्न सक्दैनस्, आइन्स्टाइन र हरिवंश आचार्यमा त छुट्टै प्रतिभा थियो र सफल भयो , तँ संग के छ ? भनेर गाली गर्छन् । १२ मा अब पढौं भने पनि उमेर धेरै भयो । म एकदमै चिन्तामा छु ।
तपाईंले १२ कक्षामा कुन विषय लिएर पढ्नुभएको थियो ? हुनसक्छ, त्यो विषय भन्दा तपाईंको रुची र क्षमता फरक विषयमा छ । सबैको रुची र क्षमता फरक-फरक हुन्छ । तपाईंलाई हिसाब गर्न मन पर्छ, सैद्धान्तिक उत्तर दिन सजिलो लाग्छ, कुनै घोकेको कुरा लेख्न सजिलो लाग्छ या आफ्नै तरिकाले उत्तर दिंदा तपाईंले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार विषय छनोट गर्नुपर्छ । अरुले के भन्छन् भन्दा पनि आफ्नो रुचि र क्षमता हेर्नुपर्छ । पढ्नको लागि उमेर कहिल्यै पनि बाधक हुँदैन । तपाईंले ८० /९० वर्षकाले डिग्री हासिल गरेका समाचार ‘सफल स्टोरिज’ मै भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने, दिउँसो जागिर र बिहान पढाइको लागि समय छुट्टाउन सक्नुहुन्छ । जागिर र पढाइ मिलाएर लैजान दु:ख त हुन्छ, तर सजिलो तरिकाले जीवनमा तपाईंले कुनै पनि कुरा हासिल गर्न सक्नुहुन्न । १२ पास गर्नुभयो भने तपाईंलाई जीवनका अरु अवसर भेटिनेछन् । आफूले पहिले पढेको विषय छोडेर , आफ्नो रुची अनुसारको विषय लिएर पढ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, अहिले तपाईंले , तपाईंमा केही कुरामा रुची छ भने त्यस सम्बन्धि तालिम लिएर अगाडी बढ्न पनि सक्नुहुन्छ । तपाईंसंग इन्टरनेटको पहुँच छ, इन्टरनेट मार्फत तपाईंले आफ्नो रुची भएको काममा के-के अवसर छन् , कसरि अगाडी बढ्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिन समेत सक्नुहुन्छ । तपाईं अरुको कुरा सुनेर निराश भएर बस्नुभयो भने , तपाईं अगाडी बढ्न सक्नुहुन्न । तपाईंले आफूले निर्णय लिनुहोस् र आजै सुरु गर्नुहोस् । सुरुवातमा न त वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ठूला थिए, न त कलाकार हरिवंश आचार्य नै । हरिवंश आचार्यको आत्मकथा ‘चिना हराएको मान्छे’ पढ्नुभयो भने पनि तपाईंले यो कुरा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ । व्यक्ति एउटा स्थानमा पुगेपछि उसको पृष्ठभूमी, उसले गरेको संघर्ष सबै छायाँमा पर्छन् । तर, सुरुवातको बिन्दुमा सफल भएका व्यक्ति पनि तपाईं-हाम्रो स्थानमा नै रहेका हुन्छन् र यिनै समस्या भोगेका हुन्छन् ।
तपाईं पनि यदि उहाँलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ ।
Previousकोलिन पावेलका प्रेरक भनाइहरु
Nextयुवा सम्बन्धि प्रसिद्ध भनाइहरु